ताजा मत परिणाम सार्वजनिक : बालेनको भन्दा स्थापितको कति मतले फरक ! - jagritikhabar.com
ताजा मत परिणाम सार्वजनिक : बालेनको भन्दा स्थापितको कति मतले फरक !
स्वतन्त्रबाट मेयरमा उम्मेद्वारी दिएका बालेन साहले काठमाडौँमा साढे ३५ हजार मत कटाएका छन् । उनले पछिल्लो मतपरिणामअनुसार ३५ हजार ७५१ मत पाएका छन् । यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेका एमालेका केशव स्थापितले भने १९ हजार ५१५ मत पाएका छन् । यस्तै उपमेयरमा सुनिता डंगोलले ३४ हजार मत पाएकी छन् । काठमाडौँमा लगातार अग्रता बढाइरहेका बालेन साहले मेयरमा जित्ने सम्भावना बलियो बनाएका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ अन्तर्गत बुटवल उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांगे्रस विजयी भएको छ । बुटवलमा पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट नगरप्रमुखका उम्मेदवार बन्नुभएका कांग्रेस बुटवल उपमहानगरपालिका सभापति खेलराज पाण्डे विजयी हुनुभएको हो । मतगणना आज भर्खरै सकिए पनि एकीकृत गर्ने काम नसकिएकाले घोषणा गर्न अझै केही बेर लाग्ने प्रमुख निर्वाचन अधिकृत लेखनाथ पौडेलले जानकारी दिनुभयो । “गणना भएका सबै मतको एकीकृत गर्ने काम भइरहेको छ, अन्तिम आधिकारिक घोषणा गर्न अझै केही समय लाग्नेछ”, प्रमुख निर्वाचन अधिकृत पौडेलले भन्नुभयो ।
बुटवलमा १९ वडा रहेकामा कांगे्रसले १२ वडामा जित हासिल गरेको छ । एमालेले पाँच वडामा जित हासिल गरेको छ भने एकीकृत समाजवादीले एक र एउटा वडा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन् ।